Isikhathi Sokuphakamisa Okuphakelayo Kwakho Kwe-RSS Kwabafileyo | Martech Zone
Isikhathi Sokuphakamisa Okuphakelayo Kwakho Kwe-RSS Kwabafileyo
NgoLwesine, Novemba 12, 2020 NgoLwesine, Novemba 12, 2020 Douglas Karr
Ngokuphikisana nenkolelo edumile, udla zisazulazula ebusweni be-intanethi… noma okungenani ngaphansi komhlaba kwayo. Ukuthengiswa kokuqukethwe kungahle kudliwe yizinhlelo zokusebenza namawebhusayithi kunabantu abasebenzisa isifundi sokuphakelayo… kepha ithuba lokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kusatshalaliswa futhi libukeka lilihle kumadivayisi wonkana kusengukuhlanganiswa kwamasu wokuqukethwe.
Qaphela: Uma ulahlekile - nayi i-athikili ekhuluma ngayo yini okuphakelayo kwe-RSS.
Ngashaqeka lapho ngibheka i-akhawunti yethu yakudala ye-Feedburner ukubona ukuthi kusenabasebenzisi abangu-9,000 + ababebheka okuqukethwe kwethu nge-feed yethu nsuku zonke… wow! Futhi lapho ngiqala ukubuka amanye amasayithi, ayenabafundi abangu-50,000 + kwamanye amabhulogi. Nazi izinto ezimbalwa esizenzile ukukhuphula okuphakelayo kwethu kwe-RSS kwabafileyo sisebenzisa i-WordPress.
Qiniseka ukuthi unayo thumela izithonjana kusayithi lakho bese ufaka ukumakwa okudingekayo ukuze izindatshana zakho zibe nesithombe esifakiwe. Lokhu kungenzeka ngeWordPress ngokusebenzisa i- I-plugin ye-SB RSS Feed Plus ngeWordPress noma ungabhala owakho umsebenzi.
Qalisa FeedPress ukuze ukwazi ukulandelela nokukala ukusetshenziswa kwakho kokuphakelayo nezinga lokuchofoza, ungenza ngokwezifiso i-URL yakho yokuphakelayo, bese uphusha okuphakelayo kwakho eziteshini zakho zenhlalo.
Faka okucashunwe ku-copyright noma shayela ezenzweni phansi kokuphakelayo kwakho nge- I-plugin ye-WordPress SEO. Sibamba abantu beba futhi baphinde bashicilele okuphakelayo kwethu ngaso sonke isikhathi futhi bayizimungulu ngokwanele ukugcina i-copyright yethu lapho bekushicilela.
Faka ikheli lakho lokuphakelayo kwimenyu yakho bese ulibeka endaweni ethile kusayithi lakho usebenzisa uphawu lwakwamanye amazwe lokuphakelayo kwe-RSS.
Faka amathegi kanhlokweni adingekayo kutimu yakho phakathi kwamathegi ekhanda ukuze izinhlelo zokusebenza neziphequluli zithole ikheli lakho lokuphakelayo, nayi ikhodi yekheli lethu lokuphakelayo:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Martech Zone Feed" href="http://feed.martech.zone" />
Bulala i-Feedburner bese uletha i-FeedPress ku-Life:
Silahle i-Feedburner sayisebenzisa FeedPress kusayithi lethu. Yipulatifomu ye-analytics yokuphakela efakiwe egcwele enezici ezengeziwe ezinhle ezifana nekhono le-CNAME okuphakelayo kwakho ukuze ungemi kulokho okudala isifunzi I-URL. Ngakho-ke, ngine-subdomain https://feed.martech.zone setha okuphakelayo kwethu!
Nakhu ukuthi ungaguqula kanjani isiza sakho sibe yi- FeedPress:
I-FeedPress inethoni yezinye izinketho zokwenza ngokwezifiso nokwandisa okuphakelayo kwakho:
Ukushicilelwa Kwezindaba Zomphakathi - I-FeedPress nayo ine-Amazing ukuhlanganiswa kwabezindaba kwezenhlalo lapho ungashicilela khona ngokuzenzakalela konke okuqukethwe okusanda kushicilelwa kuwo wonke ama-akhawunti wakho wezokuxhumana.
Okuphakelayo Tracking - ukubika okuthuthukile nokunembile kokuthi unababhalisile abangaki, kuphi, nokuthi kanjani labo ababhalisile badla okuphakelayo kwakho.
Incwajana Ye-imeyili - Kumahhala kwababhalisile abangu-1000 noma ngaphansi. Nika amandla isici sabo sezindaba bese ubamba ikhodi yefomu lokubhalisa ukuyifaka esizeni sakho.
Push Izaziso - Izaziso zokucindezela ezisebenzayo ngePubSubHubbub ukwazisa ababhalisile bokuphakelwa kokuqukethwe kwakho okusha.
Ukwenza ngokwezifiso okuqukethwe - Faka isihloko nelogo, nciphisa okuqukethwe kwakho, shintsha umbhalo ofundwayo, ulungise inani lama-athikili.
Isitifiketi Esivikelekile - Ukuphoqelelwa kwe-SSL ukukhulisa ukulethwa.
Ukuhlanganiswa kweGoogle Analytics - Ukulandelela okuzenzakalelayo kwe-UTM lapho abafundi bokuphakela bechofoza kusayithi lakho.
Amanye Amafomethi - Okuphakelayo kwakho kungadliwa ngeXML, JSON, noma i-HTML.
Iphasiwedi ye-WordPress - Uma uku-WordPress, banikela nge-plugin ukwenza izinto zibe lula kakhulu!
Qaphela: Ngifake i-URL yokusebenzisana ye- FeedPress - Futhi bancoma yesikhulumi pro!
Tags: enye indlelauhlelo lokusebenza rss xmlguqula kusuka ku-feedburner kuya ku-feedpressfeedisithonjana sokuphakelayoisifunzifeedlyi-feedpressumaki kanhlokweni wokuphakelayoungayifaka kanjani i-copyright kokuphakelayo kwakhoukushicilela kanjani kwezenhlalojson okuphakelayorss feedisithonjana se-rssrss kwezenhlaloi-rss xmlsb rss feed kanye ne-pluginWordPressplugin wordpress
I-Agorapulse Academy: Thola Ukuqinisekiswa Kwezokuxhumana
Ama-AeroLeads: Khomba amakheli we-imeyili alindelekile ngale Plugin Chrome